Talooyin Caafimaad OO Ku Socda Hooyada Uurka Leh | afrikada news online
Sidee ku ogaan kartaa inaad adiga iyo ilmahaaguba aad cafimaad qabtaan intaad uurka leedahay?
Hooyada uurka leh inaad la la samayso xiriiir joogtaa dhaakhaatiirta!
Inaad la socoto si joogtaa cafimaadka naftaada iyo ka cunugaba oo aad is baartid kolba sida uu yahay cafimaadkaagu, waayo waxay kuu suurto galinaysaa inaad ka war qabto sida uu yahay cafimaadkaagu iyo kan ilmahaaguba.
Waxa kaloo uu kuu suurtogalinayaa baaritaankaasi, in la qiimayn karo xaalka uu uurkaagu ku sugan yahay.
Ina aadan badsan cuntada, markaad wax cunaysid laakiin waa inaad aad u badsataa cabista biyaha. Ka fogow inaad cunto waxyaalaha macaan subixii. Waxa kuu wanaagsan in ay cuntadaadu noqoto cunto fudud,
Cagaha oo barara: waxaa sabab u ah cadaadis ilmo galeenka oo saameyn ku yeesha unugyada wareega ee dhiiga oo ka imaanaya laf dheerta lugta , si gaar ah waxa ay yimaadaan bilaha danbe ee Uurka.
Xanuunada Dhabarka: waa wax iska caadi ah , si xanuunadaasi ay kaaga yaraadaan , waxaad sameysaa howlaha jirdhiska fudud sida Istaag /Fariiso IWM. Ka fogow inaad qaadid waxyaabo aad u culus.
Hooyada uurka leh iyo dadka kale ee ku nool meelaha huurka leh waa inay qataan dawooyinka gooryaanka waayo waxa ku dhici karta dhiiig yaraan, dhiig yaraantuna waxay dhib ku tahay hooyada iyo ilmaha yare e dhalayso.
Hooyada dhiig la,aantu hayso ee uurka leh waxay khatar u tahay inay dhiciso ilamaha, calaamado jahwareer leh iyo dhimasho ay lasoo daristo marka dhalmada. Caruurta ay dhalaan haweenka dhiigyaradu hayso waxay ku dhashaan culays hooseyn maskax yaraan, heerkooda dhimasho oo sareeya iyo difaaca jirkooda oo liita. Waxa kaloo hoosaynaysa maskaxdooda oo fahankoodu uu yaraanayaa caruurtaas.
Hadaba sidaynu uga hor tagi kartaa dhibtaas.
In canugga marka uu dhasho la siiyo naaska ilaa labada sano ee loogu talagalay.